स्वास्थ्य/जिबनशैली Archives - Page 20 of 58 - Taja Report
August 1, 2018 Comments Off on यी हुन् शरिरमा क्यान्सर रोग भए नभएको पत्ता लगाउने ७ तरिका – डा. बराल
काठमाडौं। बरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा।राजेन्द्र प्रसाद बरालले नेपालमा ८० प्रतिशत क्यान्सरका बिरामी अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेको बताए । क्यान्सर अर्थात अर्बुद रोगबारे शनिबार लायन्स क्लब अफ काठमाडौं जोरपाटीद्वारा आयोजित सचेतनामुलक कार्यक्रमलाइ सम्वोधन [ पुरा पढ्नुहोस ]
घामले डढेको छाला ठिक पार्ने यस्ता छन् घरेलु उपायहरु
August 1, 2018 Comments Off on घामले डढेको छाला ठिक पार्ने यस्ता छन् घरेलु उपायहरु
नरिवलको तेल : गर्मीको समयमा धेरैजसो मानिसहरु महंगो ब्राण्डको सनस्क्रीन को प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तर घामका कारण छाला डढीसकेको अवस्थामा नरिवलको तेलको प्रयोग गर्नाले छालाको रंगमा केही सुधार आउछ । तेलमा थोरै कपुर मिसाएर [ पुरा पढ्नुहोस ]
सावधान ! तपाईको कलेजोमा बोसो त जमेको छैन ? कलेजो स्वस्थ्य राख्ने यस्तो छ काइदा!
July 31, 2018 Comments Off on सावधान ! तपाईको कलेजोमा बोसो त जमेको छैन ? कलेजो स्वस्थ्य राख्ने यस्तो छ काइदा!
फ्याटी लिभर अर्थात कलेजोमा बोसो जम्नु । धेरैलाई थाहा हुन्न, आफ्नो कलेजोमा बोसो जमेको । खासगरी अस्वस्थ्यकर खानेकुरा सेवन गर्ने, मदिरा पिउने, मोटोपन भएकाहरुको कलेजोमा बोसो जमेको हुन्छ । शरीरको अतिरिक्त बोसो नै कलेजोमा जम्न [ पुरा पढ्नुहोस ]
हटाई यसरी छालालाई चम्किलो बनाउनुहाेस् :: पूरा पढ्नु होस ।।
July 31, 2018 Comments Off on हटाई यसरी छालालाई चम्किलो बनाउनुहाेस् :: पूरा पढ्नु होस ।।
एजेन्सी । आजभोली छालालाई सुन्दर तथा आर्कषक बनाउने विभिन्न किसीमका सौन्दर्य प्रशाधनहरु पाईन्छ । जस्मा विभिन्न रसायनहरु मिसाईएको हुुन्छ । जसले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्छ । आज हामी तपाईंलाई प्राकृतिक उपायबारे जानकारी दिन्छौं । यसको [ पुरा पढ्नुहोस ]
July 31, 2018 Comments Off on यी रोग भएका मानिसले भुलेर पनि खानु हुँदैन तितेकरेला
करेला स्वास्थ्यका लागि आवश्यक चिज हो । तर, कतिपय बिरामीका लागि भने तितेकरेला विष साबित हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरूले तितेकरेलाको सेवन गर्नु हुँदैन : गर्भवती हुनुहुन्छ ? करेलामा भएको मोमोकेरिनले गर्भवती [ पुरा पढ्नुहोस ]
जग्गा नापमान सम्बन्धि अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी तपाईंलाई छ ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस (169)